Igbo sị na ọ na-abụ onye zoro ezoro gafee, e zoro ezoro chụba ya. N'ịgbaso nke a, o mere ndị mmadụ vam n'anya na nso nso a, dịka ndị ọrụ nchekwa na steeti Anambra gbachibìdòrò ma nwụchie ótù nnukwu ụgbọala si na steeti Plateau dị na mpaghara mgbago ugwu ala Nigeria wee buru ndị mmadụ na-abata n'ime steeti ahụ (Anambra), na-agbanyeghị na gọọmenti nyere iwu ka e mechigodi ókè ala steeti niile ugbua n'ihi ọrịa nje korona.
Aka na-achị steeti Anambra, bụ Gọvanọ Willie Obianọ agbapeela atụmatụ mmiri ọñụñụ mpaghara Otuọcha, bụ nke a maara dịka 'Otuocha Regional Water Supply Scheme'.
Nnekwu ọkụkọ sị na ọ bụ ihe o nwere ka o ji emere okeọkpa ọgọ, ebe ndị Igbo sị na ọ na-abụ a nyụkọọ mamịrị ọnụ, ọ gbaa ụfụfụ. Ka ọ dị taa, n'iji sị ya jisie ike, otù ụlọọrụ ngo mba China ejirila ihe erimeri dị iche iche wee kwàdo gọọmenti steeti Anambra n'agha ahụ ọ na-ebu megide ọrịa nje korona nà mmetụta ya dị iche iche n'ebe ụmụafọ steeti ahụ nọ.
Ngagharị ịwe na Spen
Ndị ọrụ ubi si mba Rọshịa
Otu nwaafọ Nigeria na-arịa ọrịa korona na mba China ataala onye nọọsụ mba China na-elekọta ya arụ, dịka ọ na-agbakàrị àlà isi ebe a na-elekọta ya gbapụ.
Aka akparala nụ ezekaudele, o kwuo onye chiri ya ọzọ. Onye isi ndị otu agha iyi egwu ahụ a ma ama n’ụwa niile dịka ISIS anwụọna. Baghdadi, nwoke onye okpukperechi alakụba, nke na-achị ndị otu a kpọrọ izlamik steeti, ezutego ọnwụ ya na mba Sirịa.
Mmadụ 60 anwụọna n’Afganistan
Mba Kanada eweghachina onye Praịm Mịnịsta mba ahụ bụ Justin Trudeau n’ọkwa ọchịchị. Trudeau nwetere mmeri dịka onye isi ala mba Kanada na ntụli aka ozuru-igbo nke e mere na mba ahụ ụnya bụ abalị 21 nke ọnwa Ọkụtoba.
Mick Mulvaney, otu n'ime ndị ọkwa ha gbagoro agbago na White House, obi gọọmenti mba Amerịka, atabiena ire taa. Ọ tọghere ngịga n'igbudu ahịa. Mgbe Mulvaney na-agwa ndị nta akụkọ okwu na Wọshingtịn, n'ụbọchị Tọzdee, mgbe ọ na-aza ajụjụ, Mulvaney kwetere na ịhe Prezidenti Trump jiri hapụ ịnye ndị Yukren $400 M (narị ijeri dọla anọ) ndị omebe iwu mawapụtara ha bụ iji mee ka Yukren mere ya ihe ahụ ọ chọrọ.